Nwere ike ịzụta Nokia 9 PureView na Spain n'ihu ọha | Gam akporosis
Ekwenyere Nokia 9 PureView na Spain
Nokia 9 PureView bụ otu n'ime smartphones nke mere ihe kacha masị MWC gara aga 2019. Ebe ọ bụ na mgbe ọnwa gachara, ọnwa dị elu nke ika ahụ, mbụ smartphone na ese foto azụ na ahịa, ọ dịlarị gọọmentị. Ekwentị nke ụlọ ọrụ ahụ na-achọkwa ịnwe ọnụnọ n'ime oke njedebe na gam akporo. N’oge na-adịghị anya mgbe e gosipụtara ya, ọnụahịa nke ga-enwe na mbido ya na Spain.
Na mmechi, ndị ọrụ nọ na Spain nwere mmasị ịzụrụ Nokia 9 PureView a nwere ike ime ya ugbu a. Maka ohuru ohuru ohuru a ọ dịlarị ire ere na mba anyị. Mbido dị mkpa nke ga-eme ka ị nwee mmasị dị ukwuu.
N'okwu a, ndị ọrụ nwere mmasị nwere ike ịzụta ya n'ọtụtụ ọwa. N'otu aka ahụ, Enwere ike ịzụta Nokia 9 PureView a na weebụsaịtị nke Nokia. Na mgbakwunye, ndị ọrụ debere ya, ihe ga-ekwe omume ruo ụbọchị ole na ole gara aga, nweta nrụzi ihuenyo n'efu.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịzụta ama na Amazon. Ọ bụ ezie na ọnụahịa dị na ụlọ ahịa a ma ama karịrị nke anyị nwere na weebụsaịtị nke Nokia. Na emeputa website ọ na-ekwu ekwentị maka ire ere na ọnụahịa nke 599 euro, nke na-adọrọ nnọọ mmasị ndị ọrụ. Mgbe ị nọ na Amazon, ị nwere ọnụahịa nke 668,36 euro.
O doro anya na ọdịiche ọnụahịa dị ịrịba ama maka Nokia 9 PureView a. Ọ na-atụ anya na nakwa na-aga na-ulo oru na-echekwa ụbọchị ndị a na-esote. Chee echiche banyere ụlọ ahịa dịka MediaMarkt, El Corte Inglés ma ọ bụ FNAC, n'etiti ndị ọzọ. Yabụ ndị nwere mmasị nwere ike ịga ụlọ ahịa na ihu na ihu.
Ekele maka ọnụahịa a nke euro 599, Nokia 9 PureView nwere ike ịme ebe na gam akporo a di elu. Ebe ọ bụ na a kpọrọ ya ka ọ bụrụ akara aka na mpaghara nke foto, n'ihi ọrụ nke ụlọ ọrụ siri ike na nke a. Agwọ dị ka nke a, nke dị ala karịa nke gam akporo gam akporo dị elu, nwere ike inyere ezigbo ahịa aka. Olee mmetụta ekwentị na-ahapụ gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ekwenyere Nokia 9 PureView na Spain
Samsung ga-ebido ụdị 4 Galaxy Note 10 na 4G na 5G
Esi nwalee ọnọdụ gbara ọchịchịrị na Google Chrome